२०७८ कार्तिक ६ शनिबार ०६:५५:००
अध्यक्ष ओलीले दशबुँदे कार्यान्वयन नगर्ने दिशाबाट कुरा राखेकाले कार्यदलको संयोजक रहिरहनु उचित रहेन भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावलले राजीनामा दिनुभयो, खासमा अध्यक्षले बैठकमा के भन्नुभएको थियो ?
हामीले बैठकबाट आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक (१२ कात्तिक)सम्म दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरिसक्ने निर्णय गरेका छौँ । बैठकमा उहाँ (अध्यक्ष)ले पनि त्यही निर्देशन दिइसक्नुभएको छ, खासमा अलिकति उहाँको (भीम रावल)को बुझाइमा मात्र समस्या देखिएको हो ।
बुझाइमा समस्या भन्नाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारीको विषय हो ?
मुख्य कुरा त्यही हो । उहाँले आफू इन्चार्ज बन्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । तर, अध्यक्षले ‘पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभएका पूर्वमाओवादीका नेता कमरेडहरूले त्यत्रो त्याग गर्नुभो, त्यसबापत सांसद पद गुमाउनुभो, अरू धेरै कुरा गुमाउनुभो, त्यसैले अहिले नै उहाँहरूलाई हटाउने कुरा उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले कार्यविभाजन गर्दा केही मिलाउनुपर्‍यो भने मिलाउँला, त्यो ठूलो कुरा होइन’ भन्नुभएको थियो । अध्यक्षले कार्यविभाजन मिलाएर जाने कुरामा सरसल्लाह गर्न सकिन्छ, अर्को बैठकबाट गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको हो, तर उहाँले कसरी लिनुभयो । तैपनि अबको बैठकले उहाँको कार्यविभाजनको पनि टुंगो लगाउँछ ।
शनिबार (आज)बाट तपाईंहरूको दशौँ महाधिवेशन सुरु हुँदै छ, ठीक यही वेला भीम रावलको अचानक राजीनामाले त नकारात्मक सन्देश दिएन ?
कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा कतिपय नेताहरूका विमतिहरू रहन सक्छन् । एउटा कुरामा असहमति राख्नुभए पनि बाँकी कुरामा त केही समस्या छैन । त्यस्तो नगर्नुभएको भए हुन्थ्यो । तर, उहाँको राजीनामाले महाधिवेशनको तयारीमा त्यति ठूलो असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी पार्टीलाई मिलाएर एकताका साथ नै अगाडि बढाउँछौँ ।